Nwere ike ime ka ncheta gị ka mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Mee ncheta - ajụjụ nkịtị
Mee ncheta - ajụjụ nkịtị
Nwere ike ime ka ncheta gị ka mma?
Zọ egosipụtara iji chebenchekwagunyere iri nri dị mma, na-emega ahụ oge niile, anaghị a smokingụ sịga, na idebe ọbara mgbali, cholesterol, na shuga dị n'ọbara. Ibi ndu nke uche zuru oke dịkwa mkpa. Dị nnọọ ka akwara na-esiwanye ike site n'iji ya eme ihe, mmega ahụ nke uche na-enyere aka ịnọgide na-enwe ọgụgụ isi nanchekwana ụda.
Dị ka nwa akwụkwọ, ịkwesịrị ịghọta ọtụtụ ozi ma buo ya maka ule gị. Mgbe ị nwere ebe nchekwa foto dị ike, ọrụ gị ga-adị mfe karị. Mana ọ bụrụ n’onye n’ime anyị bụ mmadụ efu, ị ga - enwe nsogbu abụọ: nke mbụ, ịchetaghị ihe niile ị kwesiri, na nke abụọ, ọ ga - ewe ogologo oge n’isi! Ọ bụrụ na m gwa gị na ị ga-enwe achicha gị ma rie ya? Nke a bụ otu ị ga - esi mee ka ncheta gị ka mma, buo ọtụtụ eziokwu n'isi ma jiri obere oge mee ya.
Jubbal, MedSchoolInsiders.com. Maka nkuzi ndị ọzọ, nghọta, na ndụmọdụ, soro m na Instagram @ medschoolinsiders.
Ugbu a enwere icheta ebe nchekwa dị iche iche, dị ka ncheta usoro, dị ka ịmara etu esi egwu bọọlụ gọọlfụ, na ebe nchekwa na - egosipụta, dị ka nka iji gụpụta ma dọrọ plexus cervical maka ule ahụ gị. Anyị na-elekọta ncheta ọmụmụ, ụdị ncheta ịkọwapụta nke ga - enyere gị aka inweta A na ngwụcha kemịkal gị yana 525 na MCAT. Site n'ịmụ netwọkụ ntanetị na slugs mmiri ka ị na-elekọta ndị ọrịa amnesiac nwere ọnya mpaghara, ndị neuroscientists mụtara ọtụtụ ihe banyere ncheta mmadụ na-arụ ọrụ yana otu esi enweta elele kachasị na hippocampi anyị.
Hippocampi bụ ebe dị n'ụbụrụ anyị nke na-echekwa ihe ncheta ogologo oge. N’ileghachi anya azụ n’ihe karịrị otu narị afọ gara aga, anyị pụrụ ikele onye ọkà n’akparamàgwà mmadụ, Herman Ebbinghaus, maka ịmụ ihe banyere ncheta nke ya ma mepụta ihe a maara ugbu a dị ka nchezọ echezọ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, usoro ichezọ echezọ na-egosi na ozugbo anyị hiwere ihe nchekwa, ka oge na-aga, anyị ga-echefu ya na ọtụtụ n’ime ya.
Ghachite ihe ncheta bụ usoro dị iche na ịchekwa, nke a, kwa, ezughị okè. Ọ bụ nke a mere na ndị ji anya ha hụ ihe mere eme amaghị nke ọma na ihe a na-akọ bụ eziokwu. Anyị maara site na ntọala nke akwara ozi na nkwughachi na-enye njikọ nke anụ ahụ ma na-enyere anyị aka iburu ihe ọmụma n'isi nke ọma.
Nsogbu a bụ na anyị nwere ọtụtụ ozi iji mụta - anyị enweghị ike ikwugharị eziokwu niile anyị kwesịrị ịma kwa ụbọchị, ozi na oge na-arịwanye elu n'etiti nkwughachi ọ bụla, anyị nwere ike ibute ncheta ahụ ma jigide ọtụtụ ozi na oge. na i ghaghi icheta ihe omuma ahu ma ghara ighota ya. Cheta na-ezo aka n'eziokwu na enyere ọkwa na ozi dị mkpa na-enweta onwe ya. Gnitionghọta ihe bụ ịmata ihe ọmụma na ịchọta ya nke ọma site n’iche echiche, “ee ee, ama m.” “Maka icheta ihe, icheta dị nnọọ mma karịa ịmata.
Nke a kwekọrọ na mmetụta ule, ebe nnwale na weghachite ozi na-ewusi usoro nzuzo nchekwa. Mmetụta ohere ga-akacha adị mgbe oge kwesịrị ekwesị; ma ọ bụrụ na obere oge gafere n'etiti ugboro ugboro, ozi ahụ anaghị abawanye ụba; ma ọ bụrụ na oge gafere, ị ga-echezọ ma ghara icheta ozi ịchọrọ. Mụ akwụkwọ ahụike nwere ọrụ nke ịmụ ọtụtụ ozi na obere oge.
Site na mkpa, ọtụtụ ngwa mmụta na-amachaghị agbanweela iji merie mmuta a na-enweghị atụ. Nke ahụ bụ Anki. Anki na ngwanrọ spacing a na - emegharị usoro na - echekwa usoro ị ga - eji mụta ihe dị ka flashcards, agbanyeghị Anki ezughi oke Anki bụ nhọrọ kacha mma anyị nwere ugbu a, enweghị m njikọ na Anki mana ejirila m ya dị ka nwa akwụkwọ ahụike ma nye m ihe ịga nke ọma na ojiji ya.
Ọ bụ ikpo okwu na mmekọrịta yana ngwaọrụ gị niile, nke dị mkpa maka ebumnuche m ga-abata n'ime obere oge. Apụghị izere ezere, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-ajụ m ma ha kwesịrị ịmepụta kaadi nke aka ha ma ọ bụ jiri oche emegoro dị mma. Approachzọ ọ bụla nwere uru na ọghọm.
Mgbe ị na-eme kaadị nke aka gị, ị na-etinye ụdị ụfọdụ nke mmụta na-arụ ọrụ ma yabụ na ị ga-amụta ozi na mpempe akwụkwọ ndị a ngwa ngwa ma ka mma. Nke abụọ, mgbe ị mepụtara kaadị, ha dị n'okwu nke aka gị na ị gaghị enwe nsogbu ka ha ghọta. Na mmechi, inwere ike itinye usoro ihe nlere anya na omume kachasi nma nke otutu umu akwukwo adighi agbaso mgbe imeputa ha.
Creatmepụta flashcards ndị a adịghị arụ ọrụ na 'adịghị mma' bụ mmejọ kachasị na ọ bụ isi ihe kpatara ụmụ akwụkwọ ji tufuo Anki kpamkpam. Isi uru nke iji oche emebere bụ na ọ ga-azọpụta gị oge ịme kaadị, ọ bụrụ na ị gbasoo ụkpụrụ nke ọwa a, ị ga-arụ ọrụ nke ọma iji mee kaadị nke gị ma rite uru ndị a ọzọ. Dị ka a na-amụrụ ọgwụ, M mgbe niile kere onwe m ndeksi kaadị, elu àgwà kaadị, i nwere ike ziri ezi na hit na-arụsi ọrụ ike mmụta maka abamuru nke oge ego.
Mgbe ị na-amụta ozi n'isi, dị ka ịmụ maka MCAT ma ọ bụ USMLE Nzọụkwụ 1, iji Anki agaghị enyere gị aka ịmụta ozi ahụ ngwa ngwa kamakwa ọ ga-edebe ya ogologo oge. Iji Anki dị ka onye ọhụụ na biology ma ọ bụ klas psychiatry gị ga-apụta na ị ga-echeta ozi ndị ọzọ 2 afọ mgbe e mesịrị mgbe ị na-amụ maka MCAT. Ọ bụghị ozi niile ka ekepụtara, na m ga-akwado Anki maka ụfọdụ nkuzi, mana maka ndị ọzọ ị nwere ike ọ gaghị achọ ya ma ọ bụ na ị nwere ike ịme obere map.
Maka nkuzi siri ike, mana usoro dị mfe nghọta, dịka bayoloji, mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze ma ọ bụ nke uche, ị dabere na Anki kwesịrị ịdị elu. Usoro ọmụmụ ndị ọzọ, dị ka physics na kemịkal kemịkalụ, na-echekwu echiche. Isiokwu ndị a niile ka ejiri kaadị akwụmụgwọ eme ihe, mana m ga-emepụta kaadị ole na ole ebe a wee bute ọrụ omume ndị ọzọ ụzọ.
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-atụ aro ịme kaadị nhọrọ ọtụtụ nhọrọ, mana anaghị m akwado ịme ya ka ị nwere ike iburu azịza ajụjụ a n'isi ma ọ bụrụ na ị banye n'ime ihe ọmụma na echiche ịchọrọ ịmụ. More na nwalere na nwalere Kaadị Ime hodszọ nke abụọ Video Medical Student, ị maara na ọtụtụ n'ime gị na-achị ga-nnọọ eme ka Flashcards. Enwerem ndepụta egwu dum banyere otu esi eji Anki rụọ ọrụ nke ọma.
Ọ bụrụ n ’ọhụụ n’ihe omume ahụ, lelee isiokwu ndị a dị mkpirikpi ga - eme ka ị nweta ọge ọ bụla. N'akụkụ nke abụọ nke isiokwu na-esote izu, anyị ga-ekpuchi usoro kachasị mma maka ịme kaadi kaadị egosi. Cheta, uru Anki bara bụ naanị dị ka kaadị ndeksi ị mepụtara.
Ugbu a n'ịmepụta kaadị ndekpọ dị mma, isi ihe bụ, iji Anki eme ihe kwa ụbọchị dịkwa mkpa. Nke a bụ otu ị ga - esi nweta ezi omume kwa ụbọchị. Lelee nke ọma na nke mbụ.
Dị ka nwa akwụkwọ ahụike, enyochare m kaadị 50-300 kwa ụbọchị maka ọnwa. Dika ogwugwo ogwugwo nke oma, enwere otutu ututu na abali nke abughi oge m nwere iji lelee oche Anki m. Yabụ iji rụọ ọrụ na kaadị m niile n'ụzọ ezi uche dị na ya na ime ka omume a bụrụ nke na-adigide, Amụtala m ịme oge ọ bụla m nwere iji nyochaa kaadị ndeksi.
N’adịghị ka ịmụ ihe ọmụmụ niile, kaadị Anki nwere njide onwe ya, nke pụtara ilele ọbụna kaadị 5 n’ime otu nkeji ma ọ bụ abụọ bụ iji oge gị eme ihe nke ọma. Nke ahụ pụtara ịgafe kaadị 10 ma ọ bụ 20 ka ị kwụ n’ahịrị maka nri ụtụtụ, na-eche igwe mbugo, ma ọ bụ ọbụna na-agagharị n’etiti ụlọ. Kaadị ole na ole ndị a na ebe a ka agbakwunyere ngwa ngwa ka m nwee ike mezue ọtụtụ nyocha m tupu m laa n'ụlọ maka ụbọchị ahụ.
Ọ bụghị ihe na-adọrọ adọrọ ma ọ dịghị mfe, mana ịme kaadị na ụzọ a bụ otu n'ime isi ihe mere ka m gwepịa bọọdụ m wee masie ndị dọkịta na-agwọ ọrịa na nyochagharị m. Onwe m, abụghị m onye ofufe ịme Anki karịa oge 30 ma ọ bụ 60 n'otu oge. Eji m ụbọchị niile m mụtara na m ga-etinye otu pomodoro nke dị nkeji 25 site na Anki iji mebie monotony nke mmụta ọzọ.
Nke a bụ ụzọ aghụghọ iji meziwanye ike uche gị ụbọchị niile. Ọ bụ n’ikpeazụ mfe karịa ime anọ iberibe 75 kaadị karịa otu nnọkọ nke 300 kaadị. Nọmba abụọ, na-eme kwa ụbọchị, Anki na-arụ ọrụ na algorithm nke na-eme ka mmụta mmụta dị elu, mana ịhazi ụbọchị adịghị mfe.
O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ n ’arịa ọrịa, mgbe ị chọrọ izuike ma ọ bụ ezumike. Ya mere, ọ dị mkpa na ị mepụtara kaadị ndeksi gị kwa ụbọchị. Nke a bụ ihe ịma aka nye izu ole na ole mbụ mgbe ị malitere ime omume ahụ.
N'oge a, nyocha gị na-arụkwa, nke pụtara ọnụọgụ kaadị ị ga-enyocha kwa ụbọchị. Nọmba nke atọ: Zere ịda n'azụ kaadị. In ga-agharịrị ada n'azụ.
Ga-awụlikwa elu otu ụbọchị n’ebe a ma ọ bụ ebe ahụ. Ghọta na nke a kwesịrị ịbụ ihe ọzọ, ọ bụghị iwu. Ka ị na-agbanyekarị ụbọchị, ọ na-esiri gị ike ijide na obere uru ị na-enweta n'aka Anki, yabụ ọ bụrụ na ị nọ n'azụ, ọ kachasị mma ị were ụbọchị ole na ole iji chịkwaa kaadị gị gafere iji jide.
Zere ịwụli ụbọchị na izere ịtọgharị kaadị ndị ahụ n'ihi na ị ga-atụfu ozi oge bara uru nke ga - enyere aka mee ka ncheta echiche gị dịkwuo ike. Nọmba nke anọ, Emela ọtụtụ kaadị Ihe abụọ kachasị ihe mere ụmụ akwụkwọ anaghị arapara na Anki bụ kaadị kaadị na-adịghị mma, nke anyị ga-ekwu maka ya na Nkebi nke 2, na krea Ọ bụrụ na iji ọtụtụ kaadị kaadị na-emepụta ibu ọrụ a na-ekwughachi kwa ụbọchị. . Mụ akwụkwọ na-ebupụkarị oge mbụ ha jiri Anki, na -emepụta ihe karịrị otu narị kaadị maka otu nkuzi.
Ghọta na kaadị ọ bụla ị mere bụ kaadị nke ịkwesịrị ịtụle n’ọdịnihu. Debe ụfọdụ ihe mgbochi ma mepụta kaadị maka ozi dị mkpa karị ma na-ahapụ nkọwa ndị na-adịchaghị mkpa. Anyị ga-agafe nke ahụ na edemede gara aga otu esi eme nke a.
Na njedebe ma ọ dịghị ihe ọzọ, Na-eme Ihe n'Eziokwu na Cheta na Nghọta Cheta na algorithm a na mmetụta dị anya na-arụ ọrụ kachasị mma na icheta, ọ bụghị mmata. N’ihi ya, aghọla aghụghọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta kaadi ziri ezi na-atụgharịghị ya wee hụ azụ, kaa kaadị dị ka ihe na-ezighi ezi.
Oge ụfọdụ, a na-amanye ụmụ akwụkwọ n’ọnọdụ ebe ha ga-aghọ aghụghọ n’ule maka ụjọ nyocha mgborogwu. N'ọtụtụ oge, enwere ike idozi nke a site na ịmepụta kaadị ndọtị ka mma. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ n ’echefuru otu mkpụrụ okwu ma ọ bụ obere nkọwa na kaadị, emebisila onwe gị ike nke na ị gaghị agafe nkeji 1.
Na akụkụ nke abụọ nke isiokwu anyị ga-ekpuchi nka na sayensị nke otu esi eme ezigbo kaadị ọkụ ọkụ Anki. Ọ bụ ezie na akụkụ dị ukwuu nke nsonaazụ dị mma na ule gị bụ iji meziwanye ncheta gị, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa ịchọrọ tweak. Ndị nkuzi anyị na MedSchoolInsiders.com nwere ike inyere gị aka imeri MCAT, USMLE Nzọụkwụ 1, ma ọ bụ nyocha ọ bụla ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ahụike ọzọ nke ịchọrọ enyemaka nwere ike inyere gị aka ịme otu ihe ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-elele anya na isiokwu anyị na YouTube, ị nwere ike ịmara otu anyị si emesi ike mkpa sistemụ na-arụpụta nsonaazụ dị mma. Nkuzi anyi abughi ihe di iche na nkuzi kachasi. Anyị na-enyocha usoro nyocha gị, usoro mmụta, ihe mgbochi na isi ihe na -emepụta ịkwa akwa iji bulie arụmọrụ gị n'ụbọchị ule ahụ.
Gaa Leta MedSchoolInsiders.com iji chọpụta tching. Ọ bụrụ na isiokwu ahụ masịrị gị, mee ka m mara ma ị nwere mkpịsị aka gị wee kwuo okwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Ọhụrụ dị na ụtụtụ Satọdee ọ bụla kụrụ Ndenye aha ma ọ bụrụ na ịnweghị ma hụ na mgbịrịgba ngosi na-arụ ọrụ. Ekele m unu niile, m ga-ahụkwa ọzọ.
Gịnị na-akpata ncheta adịghị ike
Nchegbu, nchegbu ma ọ bụ ịda mbà n'obinwere ike imeichefu echefu, mgbagwoju anya, ike itinye uche na nsogbu ndị ọzọ na-akpaghasị ọrụ kwa ụbọchị. Mmanya na-egbu egbu. Alcoholismụbiga mmanya ókè ga-emebi ikike ọgụgụ isi. Mmanya na-aba n'anya nwekwara ikeime ka ebe nchekwaọnwụ site na iji ọgwụ na-emekọrịta ihe.
Ncheta ncheta oge dị mkpirikpi, ihe ọ bụ, ihe na-akpata ya, na otu esi egbochi ya - lelee nke a. Hey ụmụ okorobịa, nke a bụ Ron White. O nwere ike ịbụ na ị hụla m na Super Lee nke Super Lee na HistoryChannel ma ọ bụ na National Geographic na-egosi Brain Games.
Mgbe m zụrụ maka USA Memory Championship ma bụrụ onye mmeri na-echeta Memory USA ugboro abụọ, echekwara m ozi na ncheta m dị mkpirikpi na ogologo oge. Kedu ihe ncheta oge dị mkpirikpi? Ncheta oge dị mkpirikpi bụ ihe ọ bụla ị nwere ike icheta naanị maka 15 ruo 30 sekọnd. Mgbe ọ gafere akara 30-sekọnd ahụ, a na-ewere ya dị ka ebe nchekwa dị ogologo oge.
Ihe atụ nke ncheta oge dị mkpirikpi nwere ike ịgụnye ma ọ bụ cheta ma ọ bụ iburu nọmba ekwentị n’isi ruo mgbe ị nwere ohere ide ya. Naanị ị na-ekwu ya ugboro ugboro na ụbụrụ gị - 867-5309 - ruo mgbe ị nwere ohere ide ya. Ihe omuma atu nke ncheta oge di nkpa bu mgbe gi na mmadu kwur ita okwu ma chee echiche banyere ihe ichoro ikwu ma debe ya na ncheta oge gi rue mgbe itinye ya na mkparita uka.
Otu nnyocha dị afọ 50 na-atụ aro na ụbụrụ nwere ike ịchekwa nkezi nke ihe ọmụma asaa na ncheta oge dị mkpirikpi. Otú ọ dị, nchọpụta ndị na-adịbeghị anya na ndị nke oge a na-egosi na ọnụọgụ a dị nso na ozi anọ nke ndị mmadụ nwere ike ịtụ ụjọ banyere inwe ncheta oge dị mkpirikpi. Mana lee ụfọdụ ihe atụ nke ncheta oge dị mkpirikpi nke zuru oke na nke ị na-ekwesịghị ichegbu onwe gị.
Mislaid nkịtị ihe dị ka igodo gị bụ kpam kpam nkịtị. Ihe atụ ọzọ agaghị abụ iji okwu dabara adaba - ọ bụcha ihe zuru oke. Enweghị ike icheta ihe ị gụrụ ma ọ bụ banye n'ime ụlọ na icheta ihe kpatara ya, enwerekwa ihe atụ nke ncheta oge dị mkpirikpi.
Ọbụna ịkpọ mmadụ aha ọjọọ mgbe ụfọdụ abụghị ihe na-echegbu onwe gị. Mana enwere ụfọdụ ihe ịrịba ama na ebe nchekwa gị nwere ike ịdị na nsogbu ka njọ, na nke ahụ gụnyere ịla n'iyi nke ịnya ụgbọ ala na ịbịaru ụlọ nso; ma ọ bụ na-esiri m ike ịgbaso ihe nkiri dị mfe ma ọ bụ ụlọ ahịa akwụkwọ. Ihe omuma ozo nke oke ncheta oge di nkenke bu ike icheta ma iri nri taa ma obu iri.
Jụ otu ajụjụ ugboro ugboro ma ọ bụ ọbụna mgbanwe mgbanwe mmadụ bụ ihe atụ ndị ọzọ dị oke ncheta oge dị mkpirikpi. Ya mere nke a bụ obere oge na ebe nchekwa ọnwụ; Ya mere, gịnị na-akpata ncheta oge dị mkpirikpi? Ikwo ụra bụ nsogbu ihi ụra nke iku ume nwa oge na-akwụsị nwa oge mana ugboro ugboro n'abalị. Nwere ike ịda ụra site na ụra ụra ma ọ bụrụ na ị jiri isi ọwụwa teta n'ụra, ike gwụrụ gị n'ehihie, ma ọ bụ ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eme mkpesa banyere nsị gị.
Ihe ndị a bụ ihe iriba-ama nke iku ume ihi ụra. Otu ihe kpatara ụra ụra na-emetụta ncheta bụ n'ihi na ụbụrụ gị anaghị enwe ikuku oxygen ruo nwa oge n'abalị, nke na-emetụta ụbụrụ gị na ebe nchekwa gị. Memorydị ebe nchekwa nke nsogbu ụra na-emetụta bụ icheta ebe itinyere igodo gị ma ọ bụ ịnwa icheta ụzọ.
Ihe ọzọ nke nwere ike ibute ncheta oge dị mkpụmkpụ bụ mgbachi nkịtị. Ọrịa ọgbụgba ndị a na-emetụta obere arịa ọbara na nke a na-emetụta oke ikuku oxygen na-abanye n'ụbụrụ gị na ncheta oge gị. Ihe nke atọ nwere ike imetụta ncheta oge gị dị mkpirikpi bụ ọgwụ.
Mgbe m na-azụ ma na-akwadebe maka USA Memory Championship, anaghị m ewere ihe ọ bụla dịka Tylenol PM ma ọ bụ Advil PM na izu ma ọ bụ ọnwa na-eduga asọmpi ahụ n'ihi na amaara m na ọ ga-ekpuchi isi m ma metụta obere oge m nchekwa. Ihe atụ ụfọdụ nke ọgwụ nwere ike imetụta ncheta oge gị dị mkpụmkpụ bụ ọgwụ ụra, antihistamines, ọgwụ mgbochi nchegbu, ihe na-egbu mgbu, yana ọgwụ ọgwụ na-arịa ọrịa shuga nke nwere ike imetụta ncheta oge gị. Ncheta oge ikpebi bụ enweghị nri ma ọ bụ, ọkachasị, enweghị vitamin B12.
Enweghi nsogbu na B12 nwere ike iduga n'ọgba aghara na ọbụna nkwarụ. Na nke ise - nchekasị, nchekasị na ịda mba nwere ike ibute ncheta oge dị mkpirikpi. Ogologo oge nrụgide na-eduga na ịda mbà n'obi na nke a ga-emetụta ike gị icheta na ịrụ ọrụ.
Chee echiche banyere ya. O nwere oge n’oge ndụ gị mgbe ike ụwa gwụrụ gị ike? Ikekwe ncheta gị dịkwa njọ n'oge a. Ya mere, nke a bụ obere oge na ebe nchekwa na ihe nwere ike ime ka ọ.
Ndị a bụ ụfọdụ usoro iji nyere aka gbochie ncheta oge dị mkpirikpi. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ihi ezigbo ụra abalị. Nnyocha na-egosi na ihi ụra awa asatọ bụ ezigbo ụra kachasị mma nke ga-akwado ahụike, ụbụrụ ụbụrụ na-arụ ọrụ n'echi ya.
Number abụọ, a oké ụzọ mbuso mkpụmkpụ-okwu na ebe nchekwa ọnwụ bụ mmega. Cheta na nchekasị, nchekasị, na ịda mbà n'obi nwere ike iduga na ncheta oge dị mkpirikpi? Otu n'ime ọgwụgwọ kacha mma maka imeri nrụgide, nchekasị na ịda mba bụ mmega ahụ. Ọ ga - enweta ọbara ahụ kwa, na mmụba ọbara a ga - enye ụbụrụ gị ikuku oxygen na ebe nchekwa gị ga - ekele gị maka ya.
Na-esote, zere ọgwụ na-enweghị isi. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ị na-a sleepingụ ọgwụ ụra, ọ ka mma ịrakpu n’ihi na ike gwụrụ gị nke ọma ma ọ bụ ogologo ụbọchị karịa ị takeụ ọgwụ ga-enyere gị aka ihi ụra n’ihi na ọ ga-achapu isi gị n’echi ya. Yabụ, ọ nwere ike bụrụ na ụfọdụ mgbakwunye ndị nwere B12, mana gbaa mbọ hụ na ị na-enweta vitamin na nri niile dị mkpa dịka nke a ga-enyere aka icheta gị.
Aụla anwụrụ. Taba ga-ebibi ihe ncheta gị. Ọ jọgburu ụbụrụ gị.
Ọ jọgburu onwe gị. Ọ dị egwu maka ncheta gị. Zere ị smokingụ sịga.
Ọ bụrụ na ibidobeghị, amalitela. Nnyocha na-egosi na ụmụ nwoke ndị na-a heavyụbiga mmanya oke na-enwe ndalata nke uche, na nkezi, afọ isii tupu ndị a thanụrụma. Ya mere, were ya were karama.
Ọ dị mma ndị mmadụ, ọmụmụ ihe ga-agwa anyị na mmadụ niile nwere ụzọ anọ ruo asaa na ncheta oge ha. Enwere m usoro akpọrọ Mind Palace na-enye m ohere ịchekwa ọtụtụ narị ozi mpempe ozi na obere oge ncheta m. Uche Mind bụ usoro ọzụzụ ọzụzụ ncheta m masịrị m.
Enwere m ọzụzụ ọzụzụ n'efu maka gị, m ga-egosikwa gị otu esi ewulite ya n'ụzọ ziri ezi ma zere mmejọ niile. Ya mere, nweta ọzụzụ maka otu esi ewulite Mind Obí n'ụzọ ziri ezi ebe a, ma ọ bụ pịa njikọ ebe a iji nata onyinye m n'efu iji nyere gị aka icheta oge dị mkpirikpi.
Kedụ ka ahụekere beekere si achọpụta Ọrịa Alzheimer?
Ndị nyocha ahụ chọpụtara na ndị nwere isi ísì na imi aka ekpe nwere mmalite mmaliteAlzheimer nwere. Ha kwuru na ndị sonyere kwesịrị ịbụ nkezi nke 10 centimeters nso naahụekere bọtaakpa iji kpoo ya site na imi ha aka ekpe jiri ya tụnyere oghere imi ha. Nọvemba
'Ahụhụ a na-anụ ahụekere ahụekere' maka ọrịa Alzheimer 'Ọrịa na-arịa ọrịa Alzheimer yiri ka ọ na-amalite n'akụkụ ụbụrụ nke na-ekwu banyere isi tupu ya agbasaa na mpaghara ụbụrụ ndị ọzọ ma mesịa weghara akụkụ nke ụbụrụ ndị ọzọ na-amalite na imi. Eleghi anya enwere mmetụta gburugburu ebe obibi nke nwere ike ịbanye n'ụbụrụ site n'ọnụ ụzọ imi. Nke a bụ ihe a na-akpọ olivactory vector hypothesis.
otú e si tụọ ịnyịnya ígwè size
Ọkpụkpụ imi nke imi na-agbazi onwe ya nke ọma ịnyefe ihe ozugbo n'ime ụbụrụ dị ka akwara ozi na-esi ísì ụtọ na-arụ ọrụ n'ime imi na-abanye n'ime ụbụrụ ahụ ozugbo ma gafere ihe mgbochi ụbụrụ ọbara. Nke ahụ bụ n'ezie ụzọ dị mkpa isi bute nje polio. N'ezie, ndị ọrụ ahụike ọha na eze bidoro mebie akụkụ akwụkwọ imi ụmụ akwụkwọ site n'ịfesa ọgwụ ọjọọ n'ime imi ha iji gbochie ọrịa ahụ.
Ya mere, nchegbu bụ na ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ike ịmịkọrọ aja ụfọdụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ nwere ike ibute ụbụrụ na ụbụrụ site na akwara ndị a na ihe dị ka 2 millimeters kwa elekere, nke bụ ihe dịka sentimita abụọ kwa ụbọchị. Ma ekwuputara obi abụọ banyere echiche a site na mkpesa banyere nwanyị nke amụrụ nwa na-amụbeghị amụ nwa nke na-amalitebeghị ísì ọjọọ dịka Alzheimer. Ya mere ruo taa, ihe akaebe niile na-akwado bụ n'ezie naanị ihe a na-eme.
O doro anya, na ngbanwe olfactory bụ otu n'ime ihe ịrịba ama izizi nke Alzheimer ka ọ pụta n'oge 'oge izizi', tupu ọgbụgba ọhụụ ọhụụ ọ bụla. Ikekwe anyị nwere ike iji mgbanwe ndị a buru amụma ma ọ bụ chọpụta ọrịa ahụ. Ruo ọtụtụ afọ, ndị na-eme nchọpụta anọwo na-anwa ịchọta ihe nrịba ama nke ọrịa ụbụrụ nke mmadụ nwere ike ịnụ ísì, na-eji ụdị ọmarịcha ngwaọrụ niile.
Igwu MRI na-arụ ọrụ nwere ike ịchọpụta ọdịiche dị n'otú ụbụrụ si arụ ọrụ na nzaghachi na ísì, na nke a lavender. Nke a bụ ihe ị ga - ahụ na ụbụrụ nkịtị. Nke a bụ ihe ị hụrụ na ụbụrụ Alzheimer, na-egosi n'ụzọ doro anya na ị nwere ike ịchọpụta mgbanwe na ọrụ olfactory n'ihi Alzheimer, mana anyị chọrọ igwe nde dollar otu? Otu ìgwè ndị nchọpụta dị omimi na Mahadum Florida chọpụtara na naanị ihe anyị nwere ike ịchọ bụ ahụekere ahụekere na ọchịchị. Brainbụrụ na-arụ ọrụ ihe anyị na-anụ n'ọnụ imi anyị aka ekpe, akụkụ aka nri nke ụbụrụ anyị na-ekpuchi imi anyị aka nri, na Alzheimer na-emetụta n'akụkụ aka ekpe karịa aka nri.
Gịnị ma ọ bụrụ na anyị mere nnwale ndị a? Mechie anya gị na ọnụ gị. Na-eku ume ume site na imi gị. Mgbe ahụ mechie otu oghere imi ma jigide onye na-erugharị n'ogologo ụkwụ site n'ọnụ imi ahụ mepere emepe.
Mgbe anya, ọnụ, na otu imi mechiri, otu akpa nke ahụekere pean nke mepere na ala onye ọchịchị na-eme ka 1 cm dị nso na ngwụpụ ọ bụla ruo mgbe onye ahụ gosipụtara na ha na-esi isi. Mgbe ahụ, ha jiri oghere imi ọzọ megharịa usoro ahụ dum. Na njikwa ndị agadi, ha na-anụ bọta ahụekere mgbe ọ dị nkezi nke 18 sentimita asatọ, nke dị ihe dị ka sentimita asaa site na imi ọ bụla.
N’oghere imi nri nke ndị ọrịa Alzheimer, ọ bụ otu ihe ahụ dị ka sentimita asaa. Enweghị ọdịiche. Ma ọ bụ naanị 5 cm na aka ekpe ya nostril.
Ahụekere ahụekere ga-abịarute sentimita abụọ tupu ha ahụ ya site n'oghere imi ya. Nke a mere oge ọ bụla ndị ọrịa niile nwere ọrịa Alzheimer nwere ike. Enweghị ọdịiche aka ekpe-aka nri na njikwa, mana 12 centimeters dị iche na otu Alzheimer.
Esemokwu ahụ dị ukwuu nke na mmadụ nwere ike ịchọta ụdị ọnụọgụ ọnụọgụ maka nyocha nke Alzheimer. E jiri ya tụnyere ndị ọrịa nwere ihe ndị ọzọ na-akpata isi mgbaka, asymmetry nostril a nke isi ísì bụ 100% mwute na kpọmkwem; H. mba ụgha na enweghị ụgha.
Ma e jiri ya tụnyere ndị ahụike, 100% nwere mmetụta dị nhịahụ n'ịchọpụta nsogbu Alzheimer na 92% akọwapụtara, ya bụ H. n'ọmụmụ ihe a, ọ bụrụ na ị nwere Alzheimer enwere 100 pasent ohere na oke esemokwu aka ekpe a mere.
Mana ọ bụrụ na ị nwere nghọtahie ahụ, ohere ịnweta Alzheimer bụ naanị 92%, nke bụ ụfọdụ Fa Ọ dịghị Ihe Dị Mma. Ihe mere ha ji ekwu 'nwere ike' Alzheimer bụ naanị ụzọ iji gosipụta onye ọ nwere bụ autopsy. Criteriakpụrụ ndị a dị ugbu a maka nyocha Alzheimer chọrọ nyocha zuru ezu, yana nyocha PET mara mma na ọnya azụ. Ule ndị a dị oke ọnụ ma sie ike ịbịa, ọ nwere ike ibute nsogbu na nsogbu.
Na mgbakwunye, ha anaghị enwe mmetụta dị oke egwu ma ọ bụ akọwapụtaghị ya, n'adịghị ka ngwa ngwa a na-adịghị emerụ ahụ, na ọnụ ala ahụekere aka ekpe maka imi aka ekpe na aka nri, nke mere ka ọ bụrụ ezigbo ngwaọrụ maka nchọpụta ọrịa Alzheimer n'oge.
Gịnị mere m ji echefu ihe ozugbo?
Ichezọ nwere ike ibilite na nchekasị, ịda mbà n'obi, enweghị ụra ma ọ bụ nsogbu thyroid. Ihe ndị ọzọ gụnyere ọghọm sitere na ọgwụ ụfọdụ, nri na-adịghị mma ma ọ bụ enweghị oke mmiri zuru oke n’ahụ gị (akpịrị ịkpọ nkụ). Ilebara ihe ndị a na-akpata ya anya nwere ike inyere gị aka ịkwụsị nsogbu icheta ihe gị.
Nchọpụta ụbụrụ nwere ike igosi mgbaka?
Dementia ụbụrụ na-enyocha
Dị ka ule ebe nchekwa, na nke haụbụrụ nyochaenweghị ike ịchọpụtamgbaka, ma ejiri ya dị ka akụkụ nke nyocha sara mbara. Ọ bụghị mmadụ niilegamkpa aụbụrụ nyocha, karịsịa ma ọ bụrụ na ule na nyochagosinamgbakabụkwarupho ụgwo ọdo.
Gịnị mere m ji echefu okwu mgbe m na-ekwu okwu?
Mgbe ịichefuotu okwu, o fugharighi na ncheta; ọ ka dị, ma n'oge aNa-ekwuihe na - egbochi ya ka eweghachite ya kpamkpam. Enweghị ike ịchọtaokwunwere ike igosi mmerụ ụbụrụ ma ọ bụ ọrịa, ọrịa strok, na ọrịa na-emebi emebi dị ka Alzheimer.01.05.2021
Kedu otu ngwa ngwa mgbaka si aga n'ihu?
Ngwa ngwaọganihu dementias (RPDs) na-aga n'ihu bụ nkwarụ naọganihu ngwa ngwa, nke na-abụkarị izu na ọnwa, mana oge ụfọdụ ruru afọ abụọ ruo atọ. RPDs dị obere ma na-esikarị ike ịchọpụta. Nchoputa mbu na nke oma di nkpa n’ihi na otutu ihe kpatara RPDs nwere ike igwo oria.
Gịnị mere m ji echefu ihe ọsịsọ?
Gini mere o ji esiri m ike ikwu okwu na mberede?
Dysarthria na - ebutekarị slurred ma ọ bụ nwayọ nwayọokwunanwere ikeisi ike ịghọta. Ihe ndị na - akpata dysarthria gụnyere nsogbu sistemụ ụjọ na ọnọdụ nke na - akpata ngọngọ ihu ma ọ bụ ire ma ọ bụ nkwarụ akwara olu. Medicationsfọdụ ọgwụ na-emekwanwere ikeakpata dysarthria.Ọnwa Ise 29, 2020
Kedu mgbe ndị ọrịa mgbaka chọrọ nlekọta elekere 24?
Ọ bụrụ na onye ị hụrụ n'anya enweghị ike ibi ndụ nke onwe ya ma ọ nweghị ikeKedumaka onwe ha ọzọ, na-akwaga n'ime ebe obibiganye ha uru nke24-nlekọta elekerena nkwado.08/27/2020
Nwere ike mgbaka na-akawanye njọ na mberede?
Mgbakabụ ọnọdụ na-aga n'ihu, nke pụtara na ọ bụna-akawanye njọoge n'aga. Ọsọ nke mmebi dị iche n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu. Afọ, ahụike zuru oke na ọrịa na-akpata ọrịa na-emebi ụbụrụ ga-emetụta usoro nke ọganihu. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-adalatanwere ikeịbụna mberedena ngwa ngwa.04.25.2019